I-Sciatica-Unobangela, isifo, ingcebiso kunye nonyango.
I-Sciatica ligama elisetyenzisiweyo xa sibhekise iintlungu ezantsi komlenze, ezihlala zisasazeka ukusuka esihlalweni (kwingingqi eqaqambayo) okanye ngasemva, ziye esinqeni, phambili ngaphandle kwethanga, ngaphakathi nangaphandle kwethole kwaye kwezinye iimeko ziye kuthi ga unyawo.
Iimpawu ezenzekayo, zombini imvakalelo yokutshintsha (ukutshintsha kobuntununtunu kunye / okanye ubungqindilili) kunye ne-motor (kubuthathaka bemisipha), kuxhomekeka ekubeni zingcambu ziphi nerve okanye iingcambu zethambo zichaphazelekile. Unobangela we-sciatica yinyani ihlala irhashalala yezintso ngenxa yomonakalo kwii-discs ze-intervertebral disc, prolapse or stenosis. Apha ngezantsi uzakufumana imithambo ekhuthazwayo.
I-sciatica engeyiyo, kwelinye icala, ihlala ibangelwa kukungasebenzi kakuhle kwimisipha kunye namalungu- anje nge-piriformis syndrome, ii-locks ezidibeneyo kunye / okanye i-myalgias yesihlalo. Abantu abanemisebenzi enzima yemizimba ukusuka kwiminyaka yobudala, kwaye abo bashukumayo kancinci, basengozini ephezulu yokuphuhliswa kweenguqu / ukulimala kwe-disc.
Kubalulekile ukuba uthathe iimpawu / izikhalazo ze-sciatica kwaye kufuneka uzixilonge ngugqirha. Zive ukhululekile ukunxibelelana nathi Iphepha lethu le-Facebook ukuba unemibuzo okanye izimvo.
- I-prolapse kumqolo ongezantsi inokuba ngunobangela weempawu zesifo se-sciatica / izifo. Lo ngumzekelo wento esiyibiza ngokuba yi-sciatica yokwenyani. Nxibelelana nogqirha ukuba uneempawu ezinjalo-ngaloo ndlela unokufumana iingcebiso ezifanelekileyo, ukuthunyelwa kwimifanekiso (ukuba iyafuneka), umthambo othile kunye nonyango olwenziwe ngokwezifiso.
I-Sciatica ligama elichaza uphawu ngakumbi kunesifo esithile okanye isifo. Kuthetha intlungu ekuhanjisweni kwe-nerve ye-sciatic-ke ngaloo ndlela ingaphezulu kwekota eliqhelekileyo, kodwa ukuba uqala ukuthetha ngemimandla ethile kunye neengcambu zentsholongwane ezichaphazelekayo, emva koko ufumana uxilongo ngakumbi.
Njengomzekelo ukuba ukucaphuka kwemithambo-luvo kungenxa yokutshixwa kwe-pelvic kudityaniswe nesifo sepiriformis kwicala lasekunene. emva koko une-diagnostic 'locking locking / isithintelo esidityaniswa ne-piriformis syndrome' (umzekelo we-sciatica engeyonyani) -kwaye ukuba ngaba iimpawu ze-sciatica zibangelwa kukukhutshwa kwediski emva koko ukuxilongwa kunokuba 'kukuphazamiseka kwengqondo / ukuqhubekeka kwediski kwi-L5 / S1 eneengcambu zothando ngokuchasene nengcambu ye-S1 yeengcambu' (umzekelo weSciatica yokwenyani).
Njengoko sele kukhankanyiwe, iimpawu ze-sciatica zibangelwa kukucaphuka okanye ukucinezela kwithambo le-sciatica - kwaye iimpawu zingahluka ngokuxhomekeke ekubeni iphi ipini kwaye yintoni unobangela. Nazi ezinye zezizathu eziqhelekileyo ezinokubangela iimpawu ze-sciatica / iintlungu:
I-sciatica / i-sciatica yobuxoki
Kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba nathi-ngokuchaseneyo ne-disc ye-disc / disc disc-into ebizwa ngokuba yi-sciatica engeyiyo, ekwabizwa ngokuba yi-sciatica. Eli lixesha myalgias, izihlunu ezixineneyo, amaxesha amaninzi izihlunu ezinobukhazikhazi kunye ne-piriformis, ngokudibeneyo nezithintelo ezidibeneyo kwi-pelvis / ezantsi ngasemva-kubeka uxinzelelo kwi-nerve ye-sciatic, kwaye ke oko kunika iimpawu ezinxulumene ne-sciatica yokwenyani.
I-sciatica engeyonyani inokunyangwa ngokufanelekileyo ngokunyanga kwinqanaba lokunyanga, ukolula, ukudityaniswa ngokudibeneyo kunye nomsebenzi wethishu ethambileyo- kunye nokuzilolonga ngokwesiko, la. Kubalulekile ukudibana nengcali ye-musculoskeletal (njenge-chiropractor okanye i-manual therapist - bobabini banelungelo lokubhekisa kwimifanekiso xa kufuneka) ngoncedo lokufumanisa isifo se-sciatica esingeyonyani.
Funda: Ukuzivocavoca oku-5 ngokuchasene neSciatica
I-VIDEO (kule vidiyo ungayibona yonke imisebenzi yokwenza kunye neenkcazo)
Aqali ividiyo xa uyicofa? Zama ukuhlaziya ibrawuza yakho okanye yibukele ngokuthe ngqo kwisitishi sethu seYouTube. Zive ukhululekile ukubhalisela ijelo simahla ukuze ujoyine usapho lwethu!
I-lumbar spinal stenosis njengesizathu se-sciatica
I-Lumbar ibonisa ukuba kukho intetho yomgogodla we-lumbar, kunye ne-spenosis yomgogodla kuthetha ukuba kukho iimeko eziqinileyo ze-nerve kumgogodla ngokwawo. Oku kunokukhokelela ekucaphukeni kwemithambo-luvo okanye ukujija kwemithambo-luvo ngenxa yento yokuba intambo yomqolo ngokwawo (icandelo lenkqubo ye-nervous central elele ngaphakathi komqolo ngokwawo) idlula kulo mjelo womqolo. I-Spinal stenosis ichaphazela ikakhulu abantu abadala ngenxa yokunxiba kunye nokukrazula / i-osteoarthritis kunye neethambo ezinxulumene nobudala kumalungu angasemva okanye entanyeni. I-Spinal stenosis iqhelekile kubantu abadala kwaye inxulumene nokunxiba kunye nokukrazula. Unokufunda ngakumbi malunga nokufumana isifo apha -Kwaye ufunde ngakumbi ngeendlela zonyango kunye namanyathelo okuphelisa iimpawu.
Funda: Ispinal stenosis yomqolo osezantsi
Ukuqubuka kwe-lumbar njengesizathu se-sciatica
Oku kuchaza ukungahambi kakuhle kwidiski apho ubunzima obuthambileyo kwenye yeediski ze-intervertebral kwi-lumbar spine (lumbar spine) inyanzelise udonga lwangaphandle olunemicu. I-Lumbar prolapse inokuthi ibe ye-asymptomatic okanye yeempawu-kuxhomekeke ekubeni kukho uxinzelelo kwingcambu / kwimithambo-luvo ekufutshane. Kwintsomi, imeko ihlala ibizwa ngokungafanelekanga ngokuba yi-disc slippage- oku akulunganga njengoko ii-discs zibambeke phakathi kwe-vertebrae kwaye azikwazi 'ukutyibilika'. Kulo mfanekiso ungezantsi ubona umzekeliso wendlela ingcambu yesibindi enokuthi ifakwe ngayo nge-disc herniation. Unokufunda ngakumbi malunga nokufumana isifo apha.
Funda: -Ukuhamba komqolo osezantsi
I-sciatica enxulumene nokukhulelwa
Ngenxa yobunzima kunye nokuma komntwana, kunokubakho uxinzelelo kwi-nerve ye-sciatic, ngakumbi kwiindawo ezibonakalayo ngakumbi-njengokuhlala. Oku kuhlala kungenabungozi kumama okanye emntwaneni, kodwa kunokubangela ukuba ndindisholo kunye nokuziva ngathi iinyawo ezinokuthi ngokungathanga ngqo zikhokelele ekuphulukaneni nomlinganiso kunye nokuwa okulandelayo. Kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba abasetyhini abakhulelweyo kwiimeko ezininzi bafumana iingxaki ze-pelvic kunye notshintsho kwindawo ye-pelvic-enokuthi ikhokelele kuthintelo ngokudibeneyo kwi-pelvis kunye nomqolo ongezantsi, kunye ne-myalgias ezinxulumene neempundu nasemqolo ongezantsi.
'I-Spondylo' ibonisa ukuba le yi-vertebra- kwaye 'uluhlu' luthetha ukuba kubekho 'ukutyibilika' kwale vertebra ngokunxulumene ne-vertebra engezantsi. I-Anterolysis ithetha ukuba i-vortex sele ine-slide ngaphambili kwaye i-retrolistesis ithetha ukuba i-vortex i-slid backward.
Ukufumana umfanekiso ongcono wokuba kuthetha ntoni oku, sikhetha ukukubonisa i-X-ray yale meko. Kwiradioograph apha, ebonisa i-lumbosacral columnalis (i-lumbar spine kunye ne-pelvis-ebonwayo kwicala) kamva, emva koko sibona indlela i-L5 (i-vertebra esezantsi kumqolo we-lumbar) eye yahamba phambili ngokunxulumene ne-vertebra engezantsi, okt S1. Le nto siyibiza ngokuba sispondylolisthesis. Iigymnast kunye nejimnastics zinomngcipheko omkhulu wokukhula kwale meko xa kuthelekiswa noluntu ngokubanzi.
I-spondylolisthesis ebalulekileyo ye-L5 ngaphezulu kwe-S1 ibonwe x-ray yokuqonda imeko yokuqonda.
Iimpawu zesiqhelo ziyakhazimla okanye zibuhlungu umlenze / ukuqaqanjelwa. Idla ngokubizwa ngokuba yintlungu ye-ayisikhrim. Iimpawu ziya kuhluka kuxhomekeka ekubeni ingcambu yeswekile ichaphazelekile na okanye sele ichaziwe - njengoko kukhankanyiwe, iprog fall inokuba yi-asymptomatic ukuba akukho xinzelelo ngokuchasene neengcambu zethambo. Ukuba ngokwenene kukho usulelo lweengcambu (ukucinezela kwengcambu enye okanye ngaphezulu), iimpawu ziya kwahluka kuxhomekeka ekubeni yeyiphi na ingcambu ye-nerve echaphazelekayo. Oku kunokubangela ukuba nemvakalelo (ukubamba, ukuqaqanjelwa, imisebe kunye nokuziva ungasebenzi kakuhle) kunye neempawu zemoto (ukuncipha kwamandla emisipha kunye neempawu ezintle).
Ukosuleleka kweengcambu nxamnye neS1 (inokwenzeka ukwanda kwe-L5 / S1)
Imvakalelo yokuziva usemvakalelo: Ukhubazeka okanye uvakalelo olwandisiweyo lunokwenzeka kwi-dermatoma ehambelana nayo ihle iye ngokupheleleyo ezinzwaneni.
Izakhono zeemoto: Izihlunu ezinesibonelelo se-S1 zinokuba namava obuthathaka ngexesha lokuvavanywa kwemisipha. Uluhlu lwezihlunu ezinokuchaphazeleka lide, kodwa amaxesha amaninzi impembelelo ibonakala kakhulu xa kuvavanywa amandla esihlunu esi kukugoba ubhontsi omkhulu ngasemva (extensor hallucis longus) umz. ngokuvavanya ngokuchasene nokumelana okanye ukuvavanywa kokunyuswa kweenzwane kunye neenzwane zeenzwane. Esi sihlunu sinokunikezelwa kwi-L5 ye-nerve, kodwa sifumana uninzi lweempawu ezivela kwi-S1.
Iiflegi ezibomvu / iimpawu ezinzima
Ukuba ukhe wabona ukuba kunzima ukuqala ngenqwelomoya xa usegumbini langasese (kugcinwa umchamo) okanye unamava okuba i-anal sphincter ayisebenzi kakuhle (ukuba isitulo sihamba 'ngqo'), ke ezi kunokuba ziimpawu ezinzulu ekufuneka ziphandwe kunye Ugqirha okanye igumbi likaxakeka kwangoko ukuze kuqhubeke uphando, njengoko oku kunokuba luphawu lweCauda Equina Syndrome. Ngokubanzi, sincoma ukuba uhlala uthethe ugqirha onelayisensi kawonke-wonke (ugqirha, i-chiropractor, okanye ugqirha onyanga) ukuze uvavanywe ukuba uneempawu zesikhalazo / izikhalazo.
Ukuphulukana ne-disc kunokuba yi-asymptomatic
Awudingi i-sciatica kuba une-disc prolapse. Uninzi lwabantu lusakholelwa ekubeni wonke umntu one-prolapse kufuneka enziwe utyando, kodwa oku akunjalo. Uphando lubonakalisile ukuba uninzi lwabantu abadala bane-prolapse okanye i-disc herniation ngasemva, ngaphandle koku kukhokelela kwiimpawu.
Ngapha koko, uninzi lwabantu abane-prolapse abanazintlungu zangasemva. Nokuba ukuphindaphindeka kunika iintlungu okanye akunjalo, ugqirha kufuneka aqwalasele kwimeko nganye. I-prolapse eqinisekisiweyo ke ayifani nentlungu ebuhlungu yomqolo okanye i-sciatica. Kukhuselekile ukuya kunyango nge-disc herniation.
Uvavanyo lweklinikhi kunye nokuqokelelwa kwembali kuya kuba ngundoqo ekwenzeni uxilongo kwaye ufumane isizathu sokuba uneempawu zesifo se-sciatica / ukugula. Uvavanyo olucokisekileyo lomsebenzi we-muscular, neurological and expressionular kubalulekile. Kukwanokwenzeka ukuba kungabandakanywa okunye ukufumanisa isifo.
Iimpawu ze-Neurological ze-sciatica
Uvavanyo lwe-neurological oluchanekileyo luya kuvavanya amandla ezinto ezisezantsi, i-lateral reflexes (patella, quadriceps kunye Achilles), sensory kunye nezinye izinto ezigwenxa.
Uphando lokuqonda isifo I-sciatica (i-X-ray, i-MRI, i-CT okanye i-ultrasound)
IX-reyi ingabonisa imeko ye-vertebrae kunye nolunye ulwakhiwo olufanelekileyo lwe-anatomiki-ngelishwa ayinakubona ngamehlo izicubu ezifanelekileyo kunye nezinto ezinjalo, kodwa inokuthi, phakathi kwezinye izinto, incede ukubona ukuba ingaba malunga i-lumbar spinal stenosis. Nye Uvavanyo lwe-MRI Yeyona nto isetyenziswa rhoqo ukuxilonga xa kukho iimpawu ezikhoyo ze-sciatica / ukugula okungaphenduli kunyango lokuthintela. Ingabonisa kanye kanye ukuba yintoni unobangela woxinzelelo lwezinzwa. Kwizigulana ezingakwaziyo ukuthatha i-MRI ngenxa yolwaphulo-mthetho, i-CT ingasetyenziswa ngokuchaseneyo ukuvavanya iimeko. Ubungakanani bento engafaniyo ke bulalisiwe phakathi kwe-vertebrae yomqolo ongezantsi.
I-X-ray ye 'sciatica' (uxinzelelo lomqolo ngenxa yokubala)
Le radiograph ibonisa ukunxiba / okunxulumene ne-osteoarthritis okunxibelelene nesizathu soxinzelelo lwe-nerve kumqolo ongezantsi. Ii-X-reyi azikwazi ukubona kakuhle izicubu ezithambileyo ngokwaneleyo ukubonakalisa imeko yee-discververtebral disc.
Imifanekiso ye-MRI ye-sciatica ngenxa yokuqengqeleka kumqolo ongezantsi phakathi kwe-L3 / L4
Olu vavanyo lwe-MRI lubonisa ukugoba komqolo phakathi kwe-vertebra ye-lumbar L3 kunye ne-L4 ngenxa yediski eyandayo.
Umfanekiso we-CT we-sciatica ngenxa ye-lumbar spinal stenosis
Apha sibona umfanekiso owahlukileyo we-CT obonisa i-lumbar spen stenosis. I-CT isetyenziswa xa umntu engenakuthatha umfanekiso we-MRI, o.k.t. ngenxa yesinyithi emzimbeni okanye kwi-pacemaker efakelweyo.
Ngeempawu zesifo se-sciatica / ukugula kubalulekile ukufumana unobangela ukuze umntu enze ngcono unyango kunye nekhosi yonyango. Oku kunokubandakanya ukunyanga ngokwasemzimbeni kwezihlunu ezomeleleyo ezikufutshane kunye nonyango oludibeneyo lwamajoyina angqongqo ukuqinisekisa owona msebenzi unokwenzeka. Unyango lokunyibilika (okubizwa njalo njengebhentshi yeengxaki) inokuba sisixhobo esiluncedo ekususeni uxinzelelo loxinzelelo kude ne-vertebrae esezantsi, iidiski kunye neengcambu zethambo.
Ezinye iindlela zonyango ludaka olomileyo, unyango lwelaser lokuchasana kunye / okanye unyango lomsinga woxinzelelo lwemisipha. Unyango luyadityaniswa kunye noqeqesho oluthe chu, oluqhubela phambili. Nalu uluhlu lwezonyango ezisetyenziselwa i-sciatica. Unyango lunokwenziwa, phakathi kwabanye, abanyangi abagunyazisiweyo kwezempilo, ezinje ngee-physiotherapists, ii-chiropractors kunye nonyango olusebenzayo. Njengoko sele kukhankanyiwe, kuyacetyiswa ukuba unyango ludityaniswe noqeqesho / umthambo.
Unyango ngokwasemzimbeni: Ukuhlanza, ukusebenza kwemisipha, ukudityaniswa ngokudibeneyo kunye neendlela ezifanayo zomzimba kunokubonelela ngokuphumla kweempawu kunye nokunyusa ukuhamba kwegazi kwiindawo ezichaphazelekayo.
ukuyifundisa: Ngokuqhelekileyo kucetyiswa ukuba abaguli abane-sciatica bafundiswe ukuba basebenzise ngokufanelekileyo i-physiotherapist okanye omnye ugqirha (umzekelo, i-chiropractor yanamhlanje okanye i-manual therapist). I-physiotherapist inokukunceda ukukhululeka kwempawu.
Utyando / utyando: Ukuba imeko iya isiba mandundu ngakumbi okanye awukabi nakho ukuphuculwa ngonyango lokuthambisa, kunokufuneka ukuba ukhulule indawo. Umsebenzi uhlala unokuba semngciphekweni kwaye uliziko lokugqibela.
Ukudityaniswa kweNtsebenzo / Uhlanganiso lweChiropractic: Uhlanganiso Izifundo (kubandakanywa uphando oluphambili lokuphononongwa ngokuchanekileyo) lubonise ukuba umgudu wokudibanisa umgudu usebenza ngokuchasene nentlungu ye-sciatica (Ropper okqhubekayo, 2015 -Leininger okqhubekayo, 2011).
Ukunyangwa kwebhentshi / unyango lwe-cox: Ukutsalwa kunye nokutsalwa kwebhentshi (ekwabizwa ngokuba yibhentshi eyoluliweyo okanye ibhentshi ye-cox) zizixhobo zomqolo wokucinezelwa ezisetyenziselwa ukusebenza kakuhle. Isigulana silele ebhentshini ukuze indawo ekufuneka ikhutshiwe / idityaniswe iphele kwinxalenye yebhentshi eyahlulayo kwaye ke ivule intambo yomqolo kunye ne-vertebrae efanelekileyo-esaziyo ukuba ibonelela ngesiqabu. Unyango luhlala lusenziwa yi-chiropractor, i-manual therapist okanye i-physiotherapist.
Inani elincinci kakhulu lezigulana ezine-sciatica zenziwa kwaye / okanye ziyaxhamla kuqhaqho. Kuya kufuneka uthathelwe ingqalelo kotyando ukuba unentlungu enganyamezelekiyo, engenakupholiswa, okanye ukhubazeke kakhulu iinyawo neenyawo eziya zisiba mbi ngenxa yoxinzelelo lwethambo. Umgqirha uya kubhekisa kutyando xa kufanelekile. Kwimeko yokuphazamiseka kokuchama ngenxa yokukhubazeka kwesinyi okanye iingxaki ze-anal sphincter, soloko ujonga kuvavanyo lotyando kwangoko. Ngokwamava, uninzi luyachacha xa lulinde utyando.
Kule "minyaka yakutshanje yezonyango", kule minyaka ingama-30 ukuya kwengama-40, kuye kwakho ukuqiniswa kweempawu ezikhokelela kuqhaqho, ngenxa yengozi yokonyuka kweempawu zokubuyela umva kunye nokuphinda ubuye kakhulu ngexesha lotyando lwangasemva - kwaye kuye kwabonwa ukuba unyango olulondolozayo (Unyango lomzimba, ukudityaniswa ngokudibeneyo, unyango lokudibana kunye noqeqesho oluthile) luneziphumo ezilungileyo kakhulu, kwaye phantse akukho miphumo mibi. Kungenxa yoko le nto, njengogqirha wale mihla enengqondo yobungqina kunye nophando, ukhetha 'uqeqesho phambi kwesikali'.
Amanyathelo okunciphisa ukubakho kwe-sciatica
Nazi ezinye zeengcebiso ngokubanzi kunye neengcebiso zeempawu zesifo se-sciatica / ukugula, nangona Sicebisa nabani na onamava anje ukuba aqhakamshelane nonyango / uvavanyo. Ngale ndlela uqinisekile ukuba zimpawu zithini kwaye uyakuyalelwa nakulona manyango lubalaseleyo olwenzelwe wena.
-Hambisa iinzwane kunye namaqatha ukukhuthaza indlela yemithambo-luvo yemisipha.
Sebenzisa amayeza okuphelisa iintlungu xa kukho imfuneko yeentlungu, i-ibux kunye neparacetamol xa zidityanisiwe zinokunika isiphumo sokushwankathela - 1 + 1 = 3! … Njengoko ibux inezinto ezininzi ezichasayo, ngelixa iparacetamol inezinye izinto ezisebenzayo ukunciphisa ukuqonda kwentlungu. Soloko uqhagamshelana nogqirha okanye usokhemesti ngaphambi kokuba uthathe amayeza.
-Fumana iintshukumo kunye nezikhundla ezinciphisa iintlungu emlenzeni, thintela intshukumo kunye nezikhundla ezonyusa ezi.
Ukusetyenziswa kwexesha elifutshane kwe-crutch ukuba kunyanzelekile
Unyango olubandayo: Beka ipakethe yomkhenkce kumqolo ongezantsi kangangemizuzu eli-10-15. Phinda amaxesha 3-4 / imini. landela icing protocol. I-biofreeze ingasetyenziswa.
- Lala ngomqolo ugobe amadolo kwaye isinqe sakho nemilenze yakho esitulweni (ekuthiwa yindawo yongxamiseko).
-Ukuhamba kancinci kulungile nokuba unentlungu enkulu, njengokuhambahamba endlini. Thatha uhambo olufutshane oluninzi kunokuba uhambe ixesha elide.
- Ukuphulula okanye ukuphululwa emathangeni, isihlalo kunye namathole, oku kunokunciphisa.
Hlala kancinci kangangoko. Uxinzelelo kwidis lubaluleke kakhulu xa uhleli.
Funda: Iingcebiso ezilungileyo ze-8 kunye neMilinganiselo ngokuchasene neSciatica
Ungayithintela njani i-sciatica?
I-Sciatica ithintelwe ngokufanelekileyo kubomi bemihla ngemihla ngokusebenza kunye nokuhamba okugcina imisipha yangasemva kwaye kubonelela ngokujikeleza kunye nokuthambisa kumalungu kunye nama-disc. Ukuba uneengxaki ngomqolo wakho, kunokubakho ukuwohloka okuqatha ngendlela ye-sciatica. Ke, thatha umhlana wakho ngokungathí sina kwaye ungalindi ukuba ufune uncedo kugqirha. Sebenzisa ukuqonda okuqhelekileyo kunye nemithwalo enzima kunye enzima, hhayi amandla okuphakamisa.
Ukuzivocavoca ngokuchasene neSciatica
Apha unokufumana ukujonga ngokubanzi kunye noluhlu lokuzivocavoca esipapashe malunga nokuthintela, ukuthintela kunye nokuphumla kwe-sciatica, iintlungu ze-sciatica, i-sciatica kunye nolunye unyango olufanelekileyo.
Isishwankathelo-Uqeqesho kunye nokuzivocavoca ngokuchasene ne-sciatica:
Ukuzivocavoca okuhle kwesi-5 Ngokuchasene neSciatica
Imithambo emi-5 yeyoga yokunyanga iintlungu
I-6 yokuzivocavoca ngamandla okomelela okomeleleyo
Ngaba ukhona umntu omaziyo ukuba uhlaselwe yintlungu ye-sciatica kunye nerve? Yabelana nabo ngenqaku.
Cofa iqhosha elingezantsi ukuze wabelane nenqaku kwimidiya yoluntu - ukuba uyafuna.
Funda: -Izinto ezi-5 eziNzima zokuZilolonga ukuba uneProlapse
Imibuzo ebuzwa rhoqo ngesi sihloko:
Kuthatha ixesha elingakanani i-sciatica engeyiyo ngaphambi kokuba ilunge?
Ixesha elithathayo ngaphambi kokuba ulahle i-sciatica yobuxoki okanye i-sciatica ixhomekeke kwindlela ongena ngayo ngokukhawuleza kwimbangela yeempawu. Oku kunokuba, umzekelo, izihlunu eziqinileyo zesitulo kunye neepiratti yesifo kunye / okanye i-pelvic edibeneyo / inguqu kumqolo ongezantsi. Sicebisa ukuba uye eklinikhi uyokufumanisa esona sizathu sokuba uziva ukuba ukhathazekile kwintlungu / nerve pain kwithambo.
Iphi i-nerve ye-sciatica?
I-nerve yengqondo yeyona nerve inde yomzimba. Luhlobo olukhulu, nerve oluyingqokelela yokwenene yeentambo ezinde zesibindi. Iqala kumqolo ongezantsi, igqitha kwi-pelvis kunye nesihlalo ngasemva kwamathanga kunye nethole, kwaye iphelela ngaphambili ezinzwaneni. Endleleni esezantsi, ibonelela izakhiwo ezininzi ezahlukeneyo ngeempembelelo ze-nerve, kubandakanya imisipha, i-tendon, i-ligaments, amalungu, amathambo kunye nolusu.
IPHEPHA ELANDELAYO: Amanyathelo a-8 aNyango oNxamnye noTyhefu ngokuchasene neRheumatism
Cofa kwikhonkco ukuya kwiphepha elilandelayo.
Ropper, AH; Zafonte, RD (26 kweyoKwindla 2015). "ISciatica." I-New England Journal of Medicine.372 (13): 1240-8. ikhonkco:I-10.1056 / NEJMra1410151.PMID 25806916.
Isitshisi, iBrent; IBronfort, iGert; UEvans, uRoni; Reiter, Todd (2011). Ukunyanzelwa komqolo okanye ukuHanjiswa kweRadiculopathy: Uphengululo lwenkqubo ”. Amayeza oNyango kunye neKlinikhi yoNyango yaseNyakatho Melika. 22 (1): 105-125. ikhonkco:10.1016 / j.pmr.2010.11.002. PMID 21292148.
UToueq et al (2010). Ukudalwa kwe-spondylolisthesis kubemi bomthambo. I-Health Health Technol Yazisa. 2010; 158: 132-7. PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20543413
(Sizama ukuphendula kuyo yonke imiyalezo nemibuzo ngaphakathi kweeyure ezingama-24)
Iifoto: I-Wikimedia Commons eyi-2.0, iiCreative Commons, iiFreestockphotos kunye negalelo lokungenisa abafundi.